ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို ဥရောပပြင်ပမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပဖို့ရှိနေပြီ
11 Sep 2018 . 2:47 PM
လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို နယူးယောက်ခ်မြို့မှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပြီး တကယ်လို့ အဲဒီအစီအစဉ်သာ တကယ်ဖြစ်လာရင် ဥရောပပြင်ပမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမယ့် ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာဖို့ ရှိနေတယ်။
ဒီနှစ် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ ကွင်းသစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Wando Metropolitano ကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ၂၀၂၀ ကျရင်တော့ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့က Atatürk Olympic ကွင်းမှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ၂၀၂၁ က စပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွက် အိမ်ရှင်ကို ရွေးချယ်ရခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
လာလီဂါလိုပဲ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကလည်း ဥရောပမြေပြင်ပမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကစားတော့မှာလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ လာလီဂါအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ Relevent ကုမ္ပဏီတို့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စပွန်ဆာစာချုပ်အရ ဒီရာသီ လာလီဂါပွဲစဉ်တစ်ပွဲကို အမေရိကမှာ ကစားဖို့ စီစဉ်နေပြီး ဒါဟာ လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြင်ပမှာ ထွက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေထွက်နေတာက လာမယ့်နှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလမှာကစားမယ့် ဟီရိုနာ-ဘာစီလိုနာပွဲက အမေရိကမှာ သွားကစားဖို့များနေပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း နှစ်တွေအတွင်း အမေရိကမှာ ဘောလုံးပွဲတွေကို အရင်ကထက် အားပေးမှု ပိုများလာတာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဈေးကွက်အရ အမေရိကကို မျက်စိကျလာကြတယ်။
ဘာစီလိုနာအခြေစိုက် Mediapro ရုပ်သံရဲ့ အမှုဆောင်ချုပ် Jaumes Roures က “အနာဂတ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နေပါပြီ”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်အတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို ဥရောပပြင်ပမှာ ပထမဆုံးကျင်းပတော့မှာလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . . .
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲရလဒ်နဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကွင်းများ
ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကို ဥရောပပွငျပမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကငျြးပဖို့ရှိနပွေီ
လာမယျ့နှဈအနညျးငယျအတှငျး ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကို နယူးယောကျချမွို့မှာ ကငျြးပသှားမယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနပွေီး တကယျလို့ အဲဒီအစီအစဉျသာ တကယျဖွဈလာရငျ ဥရောပပွငျပမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကငျြးပမယျ့ ပွိုငျပှဲဖွဈလာဖို့ ရှိနတေယျ။
ဒီနှဈ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကို အကျသလကျတီကိုအသငျးရဲ့ ကှငျးသဈကွီးဖွဈတဲ့ Wando Metropolitano ကှငျးမှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈပွီး လာမယျ့ ၂၀၂၀ ကရြငျတော့ အစ်စတနျဘူလျမွို့က Atatürk Olympic ကှငျးမှာ ကငျြးပသှားမှာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ၂၀၂၁ က စပွီး နောကျပိုငျးနှဈတှအေတှကျ အိမျရှငျကို ရှေးခယျြရခွငျး မရှိသေးပါဘူး။
လာလီဂါလိုပဲ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကလညျး ဥရောပမွပွေငျပမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကစားတော့မှာလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။ လာလီဂါအဖှဲ့ခြုပျနဲ့ Relevent ကုမ်ပဏီတို့ ခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ စပှနျဆာစာခြုပျအရ ဒီရာသီ လာလီဂါပှဲစဉျတဈပှဲကို အမရေိကမှာ ကစားဖို့ စီစဉျနပွေီး ဒါဟာ လာလီဂါသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ပွငျပမှာ ထှကျကစားမှာဖွဈပါတယျ။ သတငျးတှထှေကျနတောက လာမယျ့နှဈ၊ ဇနျနဝါရီလမှာကစားမယျ့ ဟီရိုနာ-ဘာစီလိုနာပှဲက အမရေိကမှာ သှားကစားဖို့မြားနပွေီလို့လညျး သိရပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျး နှဈတှအေတှငျး အမရေိကမှာ ဘောလုံးပှဲတှကေို အရငျကထကျ အားပေးမှု ပိုမြားလာတာကွောငျ့ သကျဆိုငျရာ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ တာဝနျရှိသူတှဟော ဈေးကှကျအရ အမရေိကကို မကျြစိကလြာကွတယျ။
ဘာစီလိုနာအခွစေိုကျ Mediapro ရုပျသံရဲ့ အမှုဆောငျခြုပျ Jaumes Roures က “အနာဂတျမှာ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကို နယူးယောကျမွို့မှာ ကငျြးပနိုငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ ဆှေးနှေးမှုတှေ လုပျနပေါပွီ”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ နှဈပေါငျး(၆၀)ကြျောအတှငျး ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကို ဥရောပပွငျပမှာ ပထမဆုံးကငျြးပတော့မှာလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . . .
ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲရလဒျနဲ့ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ကှငျးမြား